Ndezvipi zvakanakira maRFID tag
RFID yemagetsi tag ndeye isiri-yekudyidzana otomatiki kuzivikanwa tekinoroji. Iyo inoshandisa radio frequency frequency kuratidza zvinhu zvinovavarira uye kuwana data rakakodzera. Basa rekuzivisa haridi kupindira kwevanhu. Seshanduro isina waya yeiyo barcode, RFID tekinoroji ine isina mvura uye antimagnetic dziviriro iyo barcode haina, Yakakwira kupisa tembiricha, hupenyu hurefu hwebasa, kureba kwekuverenga kureba, iyo data iri pachiratidzo inogona kuvharidzirwa, iro dura rekuchengetedza simba rakakura, uye iyo yekuchengetedza ruzivo inogona kuchinjwa zviri nyore. Zvakanakira maRFID tag ndeanotevera:
1. Ziva kutsanya kushanda pakuvheneka
Kuzivikanwa kweRFID emagetsi emagetsi kwakarurama, kureba kwekuzivikanwa kunoshanduka, uye akawanda ma tag anogona kuzivikanwa uye kuverenga panguva imwe chete. Mukana wekuti hapana chinhu chinovhara, maRFID mateki anogona kuita kutaurirana kunopinda uye kusaverengeka-kwemahara kuverenga.
2. Yakakura ndangariro kugona kwedata
Iko hukuru hukuru hweRFID emagetsi emagetsi ndeye MegaBytes. Mune ramangwana, huwandu hwedata ruzivo izvo zvinhu zvinoda kutakura zvicharamba zvichiwedzera, uye kuvandudzwa kwenhamba yekutakura data kugona kuri kuramba kuchikura zvinoenderana nezvinodiwa zvinoenderana nemusika, uye parizvino iri mukugadzikana kumusoro. Iyo tarisiro yakawanda.
3. Anti-kusvibiswa kugona uye mukurumari
RFID ma tag anopesana zvakanyanya nezvinhu zvakaita semvura, mafuta nemakemikari Uye zvakare, maRFID tag anochengeta data mune machipisi, saka vanogona kunyatso kudzivirira kukuvara uye kukonzera kurasikirwa kwedata.
4. Inogona kushandiswa zvakare
RFID zvigadzirwa zvemagetsi zvine basa rekudzokorora kuwedzera, kugadzirisa, uye kudzima dhata rakachengetwa mumatagi eRFID, iyo inofambisa inotsivisa uye kugadzirisa ruzivo.
5. Diki saizi uye akasiyana maumbirwo
RFID emagetsi mateki haana kuganhurirwa nechimiro kana saizi, saka hapana chikonzero chekufananidza iyo yekumisikidza uye yekudhinda mhando yemapepa yekuverenga kunyatso. Uye zvakare, maRFID matiki ari kusimukira akananga kune miniaturization uye kusiyanisa kuisa kune zvimwe zvakasiyana zvigadzirwa.
RFID zvigadzirwa zvemagetsi zvinotakura zvemagetsi ruzivo, uye zvemukati zvemukati zvinodzivirirwa ne password, iri yakachengeteka zvakanyanya. Zvemukati hazvisi nyore kugadzirwa, kuchinjwa, kana kubiwa.
Kunyangwe ma tag echinyakare ari kushandiswawo zvakanyanya, mamwe makambani achinjira kuRFID tag. Kunyangwe zvichibva pakuona kwenzvimbo yekuchengetera kana kuchengetedzeka uye kuita, inogara yakasimba kupfuura echinyakare zvinyorwa, uye inonyanya kukodzera kunyorera munzvimbo dzine chitupa chakanyanya kudzvinyirira.
Post nguva: Apr-30-2020